10 Akanakisa Steakhouses Munyika | Save A Train
musha > Travel Tips > 10 Akanakisa Steakhouses Munyika
Paunonzwa izwi rekuti steakhouse, pakarepo iwe uchafunga kana iyo US kana Europe. zvisinei, idzi hadzisi chete nzvimbo dzekumutsa mombe uye dzinodya nyama yemombe. Wagyu naKobe, ayo anoonekwa seakanaka akachekwa mombe munyika, inotangira kuJapan. Uyezve, nzvimbo dzakaita sePortugal neArgentina dzinokodzera kutaurwa kwakakosha.
Mombe dzakadyiswa huswa dzeimwe nharaunda dzinozove nekunakirwa kwakanakira kwakanangana nenharaunda iyoyo. Ataura kuti, yakatemwa yakasviba ye steak ndiyo yekuenda-kusarudzo kune vazhinji vevanoda nyama. Isu takachengeta runyorwa urwu rwe 10 Akanakisa Steakhouses Munyika, iyo inofanira kunge iri pane yako bhakiti mazita kana nyama yechingwa chimwe chezvokudya zvako zvaunofarira.
Pakati pezvakanakisa zvekuchengetedza nyika, Goodman anobva kuNew York. Goodman akavhura bazi reLondon mu 2008, uye iyo franchise yakawedzera kune dzimwe nzvimbo nhatu kubva ipapo.
Iyoresitorendi yakapihwa Michelin Star uye inodiwa nevanoitisa nekuda kweganda rayo neakisi mazwi anotevedzera New York vibe. Vatengi vanowana sarudzo yekusarudza kubva kuSpain, UK, kana kucheka kweUS. Iyo yekudyira inoregedza nyama yayo pa-saiti uye inodada nembabvu yayo ziso.
Mancy's Steakhouse muToledo, Ohio, ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa. Iyo yekuchengetedza imba yakavambwa mu 1921 uye, kana vanhu veko vachitenda, inoramba ichirongedzwa kubvira zuva 1, kunyangwe pazuva revhiki. Inokurudzirwa kutarisa iyo Toledo radar yemamiriro ekunze usati wabuda kunze uko sezvo ungatofanira kumirira zvishoma kuti upinde.
Zvakanakisisa kusarudza zuva apo mamiriro ekunze muToledo anofadza, uye kumirira kunze kunongowedzera kutarisira kwezvako iwe mukati, kwete kukumanikidza kuti udzokere kune imwe nzvimbo. Mancy's steakhouse inoshumira kumusoro USDA Certified Angus, uye Angus Prime Steaks vakwegura uye vakaurayiwa pa-saiti. Nguva dzose zvakare unopika nezvikafu zvegungwa zvinopihwa pano, kunyanya yeAlaska King Crab neAustralia Lobster.
3. Cheka naWolfgang Puck, Singapowo
Wolfgang Puck inoda hapana sumo. Iye wekuAustria akaberekerwa muAmerican chef anozivikanwa uye mukuru weresitorendi akavhura yake yekutanga Asia yekudyira inonzi Cheka muMarina Bay Sands, Singapowo, mu 2010. Kubva kubvira humambo hweCUT hwakawedzera pasirese, asi bazi reSingapore rinoramba richive rakanakisa.
Vatongi vanogona kunakidzwa neyepasi-kirasi Kobe, 300-zuva rakadyiswa zviyo Angus, kana A5 Wagyu. Hunyanzvi hweiyi nzvimbo ndeye huwandu hwemukati meimba sosi uye yakakura yewaini muunganidzwa unoenda zvakanaka nechero prime cut ye steak.
4. Aragawa, Tokyo, Japani
Aragawa muTokyo ndiyo imwe yenzvimbo dzinodhura zvakanyanya pasi rose. Iyo yekudyira ine nyeredzi yeMichelin inozivikanwa nemubiki wayo – Yamada Jiro, uyo anosevenza chete yakanakisa Kobe nyama yemombe munyika.
Iyo USP yeiyi restoriyu ndeyekuti inosimudza boka rayo remhando dzakachena-dzakaberekwa Tajima mombe kubvira kuvhurwa kwayo mukati 1967. Iyo yakanakisa yemhando yekudzora uye sarudzo yakasarudzika yepakeji irikushumirwa inoita Aragawa yakasarudzika yekudyira sarudzo.
Iri bhizinesi-rinomhanyisa bhizinesi rinodada neUSDA yayo yekutanga nyama yemombe. Ivo vanopinza yakanakisa yenyama kubva kuma Midwest uye kuoma zera panzvimbo yacho. Iyi yekudyira ine nyeredzi yeMichelin ndiyo dangwe, zvasimbiswa mu 1887.
Iyo nzvimbo inoonekwa sechiratidzo cheNew York City yekudyira chiitiko uye tsika yekupfuura nevazhinji. Iyo Porterhouse steak, yakaoma-zera pane nzvimbo ye 28 mazuva, idyo yakakurudzirwa nedivi reGerman matapiri akaomeswa uye mukati meimba sosi.
Mhanya naPaolo Mugnai muTuscany, Antica Osteria yakavhura mikova yayo mukati 2007 uye ine rustic, yekare-nyika inzwe nezve yekutanga yekudyira chiitiko. Iyo yekudyira inozivikanwa neBistecca Alla Fiorentina yayo, steak yeItaly yakagadzirwa nevhivha kana tsiru uye yakakosha dhishi muTuscan chikafu.
Zvinonyanya kukosha zvechiitiko chekudya muAntica Osteria ndiye shefu ari kugadzirira bone-munyama pamberi pako usingashandise chinhu kunze kweTuscan maorivhi emafuta uye imwe gungwa munyu.
7. Gibsons Bhawa & Steakhouse, Chicago
MuChicago, iyo Gibsons Bar uye Steakhouse vanozvirumbidza nekuva yekutanga ketani yekutengesa munyika kugamuchira yavo USDA chitupa ye Prime Angus nyuchi.
Iresitorendi inozivikanwa nemombe yayo yeBlack Angus, zviyo-zvakadyiswa zve 120 Mazuva uyezve yakaoma-zera pane iyo fomati ye 40 mazuva. Vagari vemuno muChicago vanopika neWR's Chicago vakatema nyama, mbatatisi dzakabikwa kaviri padivi, uye maGibons akakurumbira ekurunga munyu.
8. Iyo Grillhouse, Johannesburg
Iyo Grillhouse muJohannesburg inoonekwa senzvimbo yekuchengetera yakanakisa muSouth Africa. Imba yeNew York-dhizaini imba inozivikanwa nekushandira yepasirese-spice-yakakora firlet uye yakanakisa mbabvu inoperekedzwa neye premium single malts uye omunharaunda waini.
Iyi nzvimbo inozivikanwa neinononoka-yakagochwa prime rib, iyo yakagochwa pamoto wakaderera kubva chero pakati pechipfumbamwe kusvika 12 maawa. Zvimwe zviitiko zveiyo nzvimbo zvinosanganisira T-bone uye rump. Chinoita kuti nzvimbo yekudyira iyi ipatsanuke ndeyekutanga nyama yemombe yeSouth Africa pamwe nevashandi vebasa vakanaka.
9. La Cabana, Buenos Aires, Ajendina
Sezvatakataura mune intro, Argentina ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa kuburitsa nyama nyoro uye ine muto nenzvimbo yakasarudzika. La Cabana ndeimwe yenzvimbo dzakakurumbira dzekudyira muBuenos Aires, iri munzvimbo yepamusoro yeguta.
Iresitorendi inoshambadza steaks pakudya kwemangwanani, masikati, uye kudya kwemanheru. Zvimwe zvinyore kurudziro zvinosanganisira yavo T-bone steak, mwana wemombe, prime rib, nembabvu dzakatetepa. Iresitorendi yacho zvakare inopa muunganidzwa wakakura wewaini yakanaka yemuno kuti uende ne steak yako.
10. Caprice, Leon, Speini
El Capricho muLeon, Speini, inofungidzirwa kuva nzendo nevadi venyama sezvo iri zvachose panzira dzakarohwa, kure neakanyanya kufarirwa wokukwezva vashanyi kuSpain. Inowanikwa muLeon, El Capricho inotungamirirwa naJose Gordon, mutarisiri, chef, uye murimi.
Iresitorendi inozivikanwa nenyama yayo yakakwenenzverwa kubva kumombe nemombe dzekare kubva kuIberian peninsula pakati pemakore manomwe kusvika gumi nematatu.. Kamwe kuurawa, nyama yemombe yakaoma-zera ye 160 mazuva, izvo zvakakwirira kwazvo kupfuura zvakajairwa. Vashandi vanogona kunakidzwa neT-mapfupa, kupinda, kana sirloin yakabikwa kusvika pakukwana pane yakavhurika moto grill, paired negirazi rewaini yakanaka yemuno.
Izvi zvinopedzisa runyorwa rwedu rwepamusoro pasirese 10 akanakisa ekuba. Kana iwe uchizviona iwe kunge anofarira nyama, yega yega yeiyi inofanira kunge iri pane yako bhaketi rondedzero.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga rwendo rwekudya kune iyo 10 Akanakisa Steakhouses Munyika.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "10 Yakanyanya Steakhouses MuNyika" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fbest-steakhouses-world%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)